Technical Kushambadzira neOxymoron | Martech Zone
Mugovera, Gunyana 22, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Munguva yechikoro chesekondari (uye ikozvino), ini ndaive ndakanyanya kuita sekisheni.
Ndakanga ndine mudzidzisi wechiChirungu wemitambo rimwe gore - zita rake ainzi Mr. Morgan. Yakawanda yenguva yangu naVaMorgan ndaipedzera kunze kwekirasi nekuti ndaisakwanisa kukoshesa Shakespeare. Zvakapengesa VaMorgan.
Pane imwe nguva apo VaMorgan vakabvunza, mune rake rakapfava Yale-ish matauriro, ndedzipi mhando dzehunyanzvi hunyanzvi hwaishandiswa naShakespeare muHamlet, ndakanetseka ndakasimudza ruoko.
VaMorgan vakagomera, "Hongu, VaKarr?"
"MaOxymorons?" Akadonhedza VaMorgan, "Unoziva here kuti oxymoron chii, VaKarr?"
"Chokwadi!" Ndakati, "Ndiwo mutsara wezwi risingaenzaniswi muchirevo, VaMorgan."
Kunyangwe ndaive ndakarurama, VaMorgan vachiri kutadza kukura kuti vanzwisise kuseka kwangu uye vakandiratidza musuwo. Yakawana kuseka kwakanyanya kubva mukirasi (mushure mekutanga kushamisika kwekunzwa akawanda-syllable mazwi anobva mumuromo mangu).
Handina kumbobvira ndakanganwa tsananguro ye oxymoron… uye ndinoshamiswa nekunyanyisa kwavo uye, pamwe, kukura kwekushandisa pakushambadzira tekinoroji nhasi. Kana iwe uchida kurira senge iwe une chaiyo inotonhorera chigadzirwa kana sevhisi, kanda mune oxymoron mune yako kushambadzira kana tekinoroji mharidzo. Zvinoita sevanhu vanozvida mazuvano. Muchokwadi, akati wandei eari ikozvino ave muGeekipedia.
Agile Kubudirira - Ivo vagadziri vanosetsa. Kuburitswa kuchiri kunonoka.
Kunyorera Chirongwa Chekushandisa - sekunge iwo mapurogiramu ekushandisa pachawo.
chakagadzirwa Intelligence - hazvisi zvekugadzira, ndezvechokwadi.
Energy Alternatives - iyo chete imwe nzira yesimba inyaya yerima.
Shamwari URL - chii chinorehwa URL?
Internet Radio - kana iri paInternet, haisi redhiyo
$ 100 Laptop - simba? Indaneti?
Net Neutrality - chero munhu akambonzwa nezvazvo Akamai or S3?
User Interface - ichiri checomputer, kwete ini.
Tsvaga Injini yekutengesa - haisi kushambadzira (ndine hurombo), iko kuiswa.
Seamless Kubatanidzwa - kana ichibatanidzwa, zvinoreva kuti kune seam pane imwe nzvimbo.
Chii chaunofarira oxymoron?